Valin'ny fanadihadiana - Ny valisoa fanolorana
Home Resaka fanadihadiana
Ny Reward Foundation dia manampy amin'ny fampahafantarana ny fivoaran'ny fikarohana lehibe amin'ny firaisana ara-nofo sy ny fitiavana ary ny olana ateraky ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Izahay dia manao izany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fakan-kevitra ataon'ny governemanta sy ny indostria. Ity pejy ity dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao momba ny fandefasana nataonay tamin'ny fizotran'ny fakan-kevitra ataon'ny governemanta.
Raha toa ianao ka mianatra torohevitra hafa izay afaka manampy ny The Reward Foundation, azafady mailaka.
8 Desambra 2020. Darryl Mead dia namaly ny filankevitry ny governemanta Scottish nantsoina Azo antoka ihany: fifampidinihana momba ny fitakiana fanambadian'ny lehilahy amin'ny fivarotan-tena, miasa mba hampihenana ireo voka-dratsy mifandraika amin'ny fivarotan-tena sy fanampiana ny vehivavy hivoaka. Na ny valiny dia nanohana ny fananganana ny Modely Nordic any Ekosy, araka izay natolotry ny Modely Nordic izao!
22 Jolay 2019. Nandray anjara tamin'ny famoronana drafitra ny TRF mba hamaritana ireo fanontaniana izay ho ampiasaina amin'ny fanadihadiana NATSAL-4. Ny National Survey momba ny firaisana ara-nofo sy ny Lifestyles dia nihazakazaka teto Angletera hatramin'ny 1990. Iray amin'ireo fanadihadiana lehibe indrindra amin'ny karazany eto amin'izao tontolo izao izy io.
28 Janoary 2019. Mary Sharpe dia nanome valiny feno momba ny fanadihadian'ny Komitim-pifidianana Commons momba ny fitomboan'ny Teknolojia Immersive sy Addictive. Ny fanadihadiana dia natao tao amin'ny Departemantan'ny Digital, Culture, Media ary Sport. Tokony havoakan'ny Parlemanta UK izany ato ho ato.
16 Jolay 2018. Any Scotland, ny filankevitry ny mpanolotsaina nasionaly voalohany momba ny vehivavy sy ny tovovavy dia nanomboka fandaharana iray hanasana ny valin'ny consultation momba ny olan'ny vehivavy. Ny fanoloranay voalohany dia ny fifandraisana misy eo amin'ny fanorisorenana ara-nofo sy fampiasana sary vetaveta.
6 Desambra 2017. TRF dia namaly ny paikady Green Paper Consultation an'ny Green UK. Nandefa taratasy ihany koa izahay ho an'ny ekipa tetikady fiarovana ny Internet ao amin'ny Departemantan'ny Digital, Culture, Media ary Sport momba ny fanitsiana ny lalàna momba ny toekarena nomerika. Ny hevitray dia ny governemanta UK dia tokony hifikitra amin'ny fanolorantenany hanao zavatra izay tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna ary tsy ara-dalàna koa amin'ny Internet. Ny sehatra lehibe dia ny fanesorana ny fidirana amin'ny sary vetaveta mahery setra sy sary mametaveta ankizy tsy sary.
11 June 2017. Mary Sharpe dia nandefa valiny tamin'ny consultation an'ny Paikadin'i Scotland amin'ny fisorohana sy famongorana ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny zazavavy. Ny valinteninay dia navoakan'ny governemanta Scottish momba azy tranonkala.
April 2017. Ny Fondation Reward dia asongadina ho loharano iray misy rohy mankany amin'ny pejy fandraisanay ao amin'ny Drafitr'asa Nasionaly momba ny fiarovana ny Internet ho an'ny ankizy sy ny tanora navoakan'ny Governemanta Scottish.
8 Martsa 2017. TRF dia nanao fanolorana an-tsoratra ny fanadihadian'ny Parlemanta Kanadiana momba ny fiatraikan'ny pôrnôgrafia mahery setra amin'ny tanora. Hita eto izy io anglisy ary frantsay. Ny fanoloran-tenantsika dia navoakan'ny Dissenting Report izay nomanin'ny mpikambana avy amin'ny Conservative ao amin'ny Komity.
Febroary 2017. Ny governemanta Scottish dia nanasa fandefasana teny 100 momba ny hoavin'ny fandaharam-pianarana Edena manokana sy ny firaisana amin'ny sekoly Scottish. Ny fanoloran-tenan'ny Foundation Reward dia laharana faha-3 Eto.
11 Febroary 2017. Mary Sharpe sy Darryl Mead dia nanolotra hetsika fiofanana tamin'ny pôrnôn'ny Internet tamin'ny tanora 15 tao amin'ny programa 5Rights tao Young Scot momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny tanora any Ekosy. Izany dia nanjary ampahany tamin'ny fizotran'ny consultation izay nitarika ny famoahana ny Ny tatitra farany nataon'ny Kaomisionan'ny 5Rights tamin'ny governemanta Scottish dia ny 2017.
20 Oktobra 2016. Mary Sharpe sy Darryl Mead dia nasaina hanatrika Symposium iray tamin'ny 'Fiarovana an-tserasera an-tserasera: mijanona eo alohan'ny lalao' ao amin'ny Portcullis House, Westminster. Ny hetsika dia nokarakarain'ny Antoko Mpiasan'ny Parlemanta UK momba ny Fianakaviana, Lords ary ny Group Family and Child Protection Group hanampy amin'ny fandaniana ny Volavolan-dalàna momba ny Toekarena nomerika amin'ny alàlan'ny Parlemanta UK. Misy ny tatitra momba ny Symposium Eto. Tany aloha tany amin'ny 2016 izahay dia namaly ny fanadihadiana an-tserasera momba ny volavolan-dalàna navoakan'ny Departemantan'ny Kolontsaina, Media sy Sport.
9 Martsa 2016. Ny valin'ny Fanamarinana dia namaly ny fangatahana porofo voasoratra avy amin'ny Loholona Aostraliana momba ny "Mampalahelo ny ankizy aostraliana amin'ny alàlan'ny fahazoana sary vetaveta amin'ny aterineto". Ity dia navoaka dia endrika kely novaina ho fanekena 284 ary azo jerena amin'ny fidirana ao amin'ny Parliament of Australia tranonkala.